Nagu saabsan - Guangdong Donghua Optoelectronics Technology Co., Ltd.
Guangdong Donghua Optoelectronics Technology Co., Ltd. (DHUA) oo hore loogu magacaabay Dongguan Fenghua Acrylic & Mirror Craft CO., Ltd, waa soosaaraha muraayada caaga ah iyo alaab-qeybiye oo xarunteedu tahay magaalada Dongguan, Shiinaha. Waxaa la helay sanadkii 2000, DHUA waxaa ka go'an inay bixiso xaashi tayo sare leh oo tayo sare leh iyo warqado kala duwan oo muraayado balaastik ah, sida muraayadda loo yaqaan 'acrylic mirror, polystyrene mirror, polycarbonate mirror, PETG mirror, anti-fog mirror, mirror two way mirror, convex mirror, convex / concave lens iyo muraayadda Fresnel iyo sidoo kale adeegyo jar jaban.
Iyadoo la adeegsanayo teknoolojiyada wax soo saarka horumarsan iyo tas-hiilaadka, DHUA waxay u fidisaa macaamiisha adeegyo xirfad-yaqaan ah iyo Hal-Joogsi iyadoo la dhameystirayo wax-soo-saarka oo dhan ee sameynta xaashi hufan, dahaadhida faaruqinta, goynta, qaabeynta, is-gaarsiinta nafsadeena. Horumarka wanaagsan ee warshadaha, DHUA waxay hadda noqotay soo saare tayo leh oo ugu fiican alaabada xaashiyaha muraayadda loo yaqaan 'acrylic (PMMA)' ee Shiinaha dadaalkeenna in ka badan 20 sano.
Xaashiyadan muraayadda ah ayaa si ballaadhan loogu dabaqay qaybo kala duwan sida toy, alaabta guriga, iibka / Goobta iibsiga, soo bandhig tafaariiqda, calaamadaha, amniga, qurxinta, iyo baabuurta.
Tayada soo saaraha tayada ee Shiinaha
Khadadka wax soo saarka otomaatiga ah ee casriga ah
Celcelis soo saar maalinle ah
DHUA waxay aqoonsan tahay in macmiil qanacsan uu muhiim u yahay nolosheena, barwaaqadeena iyo kartideena inaan ku korno. Sida urur ka diiwaan gashan ISO-9001 iyo Teknolojiyada Sare, u adeegida baahiyaha macaamiisheena alaab tayo leh iyo adeeg heer sare ah waa aasaaska dhaqanka ee adeegyadeena wax soo saar, bayaankan waxaa lagu matali doonaa dhamaan shaqooyinka ay qabtaan shaqaalaha DHUA.
Shaqaale kasta oo ka tirsan DHUA wuxuu mas'uul ka yahay tayada iyo waqtiyada alaabteenna. Dhammaan alaabooyinkeennu waa kuwo caalami ah, sida Rohs, EN-71, ASTM, REACH iyo SGS.
Falsafadeena tayada leh waxay soo bilaabatay 2000 waxayna noo keeneysaa sumcad adag. Maanta Donghua waa hogaamiye tayo leh, oo u shaqeeya in ka badan 300 oo shaqaale ah una adeega macaamiisha adduunka in ka badan 80 dal. Waxaan abuurnay iskaashi istiraatiiji ah oo waqti dheer ah shirkado badan oo awood badan sida NVC, Li & Fung, Hasbro, Sony, Mcdonald's, Mattel, Estee Laudder, Dior, Greek, Ge Lanshi iyo Midea ect.
Kooxdayadu waa kooxdaada. Waxaan ka mideysanahay sameynta sida ugu fiican ee aan kuugu adeegi karno kooxdeena xirfadleyda ah oo ka kooban xubno xamaasad leh, go'an oo karti badan leh